Tohodranon’i Dabara Morondava : tsy nahavaha ny olan’ny tantsaha · Aponga
Tohodranon’i Dabara Morondava : tsy nahavaha ny olan’ny tantsaha
Efa tamin’ny taona 2007 ny tetikasa nanamboarana ny tohodrano any Dabara Morondava. Niato ny asa vokatry ny krizy 2009 ary nitohy ny taona 2014. Tsy nahavaha ny olana anefa fa vao mainka tsy afaka mamboly ny tantsaha any amin’ny faritra iva, toy ny any Morondava.
Tsy hita ny vahaolana akaiky! Lemaka maherin’ny 10.000 ha ny novinavinaina fa ho voajary aorian’ny fanajariana ny lemak’i Dabara any amin’ny manodidina an’i Morondava, faritra Menabe. Nomena toky fa afaka mamboly vary intelo isan-taona mihitsy aza ny tantsaha aorian’ny fahavitany.
Tsy tanteraka izany fa vao mainka aza ny mifanohitra amin’izany ny zava-misy satria mihena ny habetsahan’ny rano. Tsy nahazo rano intsony koa ny any amin’ny faritra iva, toa ny any Morondava sy ny manodidina, fa voatazona any amin’ny distrikan’i Mahabo sy ny manodidina, toerana ambony avokoa ny rano. Noheverina fa ho 16m3/s ny hadirin’ny habetsahan’ny rano, nefa tsy misy afa-tsy 7m3/s izany, ankehitriny.
Hikaroka famatsiam-bola vaovao hafa
Hatreto, nilaza ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana, Randriarimanana Harison, fa mahatonga ny olana ny hakelin’ny habetsahan’ny rano amin’ny lakandrano, mirefy 52 km. Tany am-boalohany, noheverina fa hanondraka ny tanimbary any amin’ny avo toerana sy ny any amin’ny iva ity lakandrano ity. Tsy tao anatin’ny vinavina ny faritra antenantenany toy ny any Mahabo. Mitombo izaitsizy anefa ny tantsaha mamboly amin’iny faritra iny, ka tsy ampy intsony ny rano. Tsy misy vahaolana afa-tsy ny mampitombo ny halavan’ny lakandrano, izay mbola eo am-pikarohana ny mpamatsy vola hanaovana ny asa.
Nitarika fitokonana ho an’ny tantsaha any Morondava ity tranga ity, volana septambra 2017 teo. Najoro ny vaomiera iombonana handinika ny raharaha. Hany vahaolana vonjimaika hita ny fitsinjarana ny andro hitaritana rano. Omena 10 andro ny any amin’ny faritr’i Mahabo ary ampifandimbiasina, omena 10 andro koa avy eo ny any Morondava.
Tobim-piantsonana AndohatapenakaNisy ireo koperativa no tsy nanaiky ny hifindra
Alaotra-Mangoro – Présentation de vœux sous la pluie
Météo : une saison orageuse et pluvieuse se poursuit à Madagascar